दुईजना बच्चासहित एक महिलालाई नेपाल डिपोर्ट गर्ने इजरायलको तयारी - Sidha News
दुईजना बच्चासहित एक महिलालाई नेपाल डिपोर्ट गर्ने इजरायलको तयारी
जेरुसेलम । एक नेपाली महिलालाई उनका दुईजना बच्चासहित इजरायलले नेपाल डिपोट गर्ने निर्णय गरेको छ । ती बच्चाहरु इजरायलमै जन्मेको र उनीहरु भारतीय बाबुका सन्तान हुन् ।
इजरायलको जनसंख्या र अध्यागमन प्राधिकरणले बिहीबार जनाएअनुसार इश्वरा उप्रेती र उनकी ४ वर्षीया छोरी शिरा र ९ वर्षिय छोरा माइकललाई विमान चढाएर आज शुक्रबार नेपाल फर्काउन लागिएको हो । सो फ्लाइट भारतमा रोकिएर नेपाल जाने बताइएको छ । ‘उनी नेपाल जान चाहे पनि वा भारतमै रहन चाहे पनि रहन सक्ने’ सीमा नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकारी इलिमेलेक वेचलरले आफ्नो आदेशमा लेखेका छन् ।
तर, पुनरावेदन सम्बन्धी तेल अभिभमा रहेको एउटा न्यायाधीकरणले भने उनीहरुको डिपोटलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ र आइतबारसम्म परिवारको भनाइको सुनुवाई गर्न आग्रह गरेको छ ।
परिवारका वकिल डेभीड टाडमोरले डिपोर्टेसनले परिवारकै विछोड हुने जनाउँदै उप्रेतीले भारतमा कानुनी स्ट्याटस नपाउने जिकिर गरेका छन् । गएको साता उनी र उनका बच्चाहरुलाई गिभोन जेलमा लगिएको थियो र त्यहाँ उनीहरु डिपोटको समय पर्खेर बसेका थिए ।
हिरासतका न्यायाधीश इलान हालेभ्गाले उनीहरुको सोमबारको सुनुवाईसम्म त्यहीँ बस्न आदेश दिएका छन् । बाबु भारतीय भएका ती बालबालिका इजरायलस्थित नेपाली दूतावासमा दर्ता छैनन् । उनीहरु नेपालीको रुपमा गणना नहुने समेत जनाइएको छ । उनीहरुका बाबुलाई अध्यागमन कार्यालयले दबाब दिएर आवश्यक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ताकि उनीहरुलाई भारतमा डिपोट गर्न सकियोस् । विदेशी पति इजरायलमा होम हेल्थ एडको रुपमा कार्यरत रहेको तर छुट्टै सहरमा बस्ने गरेका छन् । उनी दुई महिनामा एक पटक मात्रै बच्चाहरुलाई भेट्न आउने गरेका थिए ।
उनले बच्चाहरुलाई पनि अहिले मद्धत नगरेको जनाइएको छ । पुनरावेदनका क्रममा टाडमोरले आमालाई इजरायलले अमानवीय धम्की दिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले महिला तथा बालबालिकालाई तत्कालै धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । उनले बच्चाहरुको अवस्था जेलमा राम्रो नभएको समेत जनाए । उनीहरुसँग फेर्ने लुगा पनि नभएको जनाउँदै उनीहरुले साबुन मागेको तर नदिइएको समेत जनाएका छन् ।
४ वर्षीया बालिकाले जेलमा राम्रो खाना पनि नपाएको र आमा चाहिँ जतिबेलै रोइरहेको वकिलले जनाएका छन् ।
उप्रेती सन् २००७ मा वैध रुपमै इजरायल प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी होम हेल्थ एडका रुपमा गएकी थिइन् । तर, उनको छोरा जन्मिएपछि भीसा नवीकरण नभएको जनाइएको छ । उनी र उनका बच्चा गएको बिहीबार पक्राउ परेका हुन् । छोरा उनको बाबुकहाँ गएको भए पनि उनी पनि सोही दिन पक्राउ परेका थिए । हिरासतका न्यायाधीश राजा मार्जूकले यो अवस्थामा त्यो परिवारलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको जनाएका छन् ।
उनीहरुको डिपोट अवैध हो कि होइन भन्ने पनि उनले खुलाउन चाहेका छैनन् । मनोविद्हरुका अनुसार ती बच्चालाई डिपोट गरिए उनीहरुलाई ‘गम्भीर चोट’ पर्न सक्ने जनाएका छन् ।
(हरेट्ज डट कम)
क्यानाडाले नेपाली सहित १२ लाख मानिस लैजाने, इतिहासमै धेरै आप्रवासी भित्र्याउने
साउदीमा रहेका नेपालीलाई फेसबुकमा अभद्र कमेण्ट नलेख्न चेतावनी
आफन्तको मुख हेर्ने चाहना थियो, विदेशबाट खरानी बोकेर आयो जहाज !
मकाउमा कार्यरत मोहनको काठमाण्डौमा मृत्यु, मकाउ रिटनर्सद्वारा श्रद्धाञ्जलि सँगै आर्थिक सहयोग
यूएईमा एउटै कम्पनीमा कार्यरत २४७९ नेपालीको रोजगारी गुम्यो, जहाज चार्टर्ड गरेर नेपाल पठाउने
युएईबाट एक सय ५१ नेपाली लिएर नेपाल उड्यो हिमालय जहाज
यिनको नाममा को चढ्यो जहाज ? कलिम भन्छन् ‘म सारजहामै छु, घर कसरी पुगें ? जवाफ चाहियो’
नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई विवरण बुझाउन दूतावासको अनुरोध